Kutheni Khetha Us - Quanzhou New Hunter Bags & Imithwalo Co., Ltd.
Yeyiphi Inkonzo Esinokuyinika
Umzingeli uzibophelele kukugqwesa kuyo yonke into esifuna ukuyenza, sijolise ekwenzeni ishishini ngendlela engatshintshiyo necacileyo kubo bonke abaxumi bethu kwaye asibambi mali kwizabelo zabathengi bethu. Abathengi bathembela kakhulu kuthi, ngakumbi xa kuziwa ekuphatheni ulwazi oluyimfihlo kunye nolwazi oluyimfihlo. Idumela lethu lokuthembeka kunye nokusebenzisana ngokufanelekileyo kubalulekile ekuphumeleleni nasekugcineni le ntembeko.
Ulawulo loMgangatho olungqongqo: Ilaphu elicekeceke kunye nokuthelekisa izinto kunye nokukhetha kwasekuqaleni kwisampulu nakwimveliso yesambuku. iinkqubo zovavanyo ezineenkcukacha Ayisiyiyo kuphela indlela yokuziphatha yomntu kodwa imiba yemichiza. Uxanduva oluhlala luhleli xa kwinqanaba lesampulu okanye ubuninzi emva kwentengiso.
Iminyaka engama-24 kwiNgxowa kunye noMhlaba weMpahla, Ukwenza nje umahluko, uyilo olwahlukileyo, imveliso eyahlukileyo yokuhlangabezana nefashoni eQhelekileyo.
Isindululo sobuchule bokuthunga kuyilo lwakho lwengxowa, iindlela zokuvavanya ezihambelanayo ziyacebisa ukuthelekisa iimarike zakho.
Warranty: Sizimisele ukuba umgangatho nokuhlolwa, kodwa ukuba kukho naziphi na iziphene okanye iziphene ngexesha ukuthuthwa kunye nokusetyenziswa imveliso, nceda uqhagamshelane nathi ngoko nangoko nge email.
Isampulu yasimahla inokunikezelwa ngokusekwe kwisitayile esithile. Amakhulu eengxowa ezahlukeneyo ezahlukileyo ngonyaka, iimveliso ezintsha ziphuhlisa ixesha ngalinye lonyaka.